Beta-1aad ee watchOS 2.2.2, 2aad ee tvOS 9.2.2 iyo OS X 10.11.6 | Wararka IPhone
Mar labaad, Apple waxay sameysay talaabooyinkeedii caadiga ahaa markay tahay sii deynta softiweerka waxayna sii deysay betas cusub dhammaan nidaamyadeeda ay ku shaqeeyaan. Ka dib markii la sii daayay beta labaad ee macruufka 9.3.3, Apple ayaa sidoo kale sii daayay OS X 10.11.6 iyo tvOS 9.2.2 betas labaad. Markii ugu dambeysay ayaan seegnay beta-ka nidaamka applew smartwatch operating system, laakiin markan waa yimid. Si aad u noqoto mid sax ah, maanta ayaa beta ugu horeeya ee watchOS 2.2.2.
Waqtigan xaadirka ah, wararka ugu weyn ee ku saabsan dhammaan bilaabitaanku waa maqnaanshaha wararka. Caadi ahaan, isbeddelada ugu muhiimsan waxay ku yimaadaan nuucyada loo yaqaan 'decimal first', sida ku dhacday iOS 9.3 oo leh 'Night Shift' iyo wararka loogu talagalay waxbarashada, iyo waxyaabo kale, ama codsi cusub oo Muusig ah oo ay diyaarisay Apple. 8.4. Cusboonaysiintaan waxaa loo soo dayn doonaa ujeedo kaliya hagaajinta waxqabadka, kalsoonida iyo amniga nidaamka.
Ma jiro wax beta ah oo ay ku jiraan warar aan fiicnayn
Xusuusnow in macruufka 8.4 ay kujireen isbadalada dalabka muusigga, waxaan had iyo jeer ka fikiri karnaa wararka muusikada ee aan rajeyneyno inay kusoo bandhigi doonaan WWDC Waxaa lagu sii deyn doonaa macruufka 9.4, laakiin tani xoogaa lagama yaabo. Waqtigaan, wax walba waxay naga dhigayaan inaan u maleyno in wax kasta oo cusub oo muhiim ah oo ku imaan doona mid ka mid ah nidaamyada hawlgalka ee Apple ay ku imaan doonaan noocyada soo socda. Waxyaabaha xun ayaa ah in noocyada soo socda la soo bandhigi doono toddobaad gudihiis, laakiin si cad looma sii deyn doono, ugu yaraan kuwa iOS, OS X iyo watchOS, illaa ugu yaraan Sebtember.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad rakibtid mid ka mid ah afarta betas ee maanta la sii daayay, ha ka waaban inaad uga tagto khibradahaaga faallooyinka. Yaa og? Waxaan had iyo jeer heli karnaa wax cusub oo aan ka muuqan liis kasta, laakiin taasi waa tan ugu soo dhoweynta badan: dheecaan badan iyo xawaare.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Beta-ka hore ee watchOS 2.2.2 wuxuu la imanayaa kuwa labaad ee tvOS 9.2.2 iyo OS X 10.11.6
Apple wuxuu sii daayaa beta labaad ee iOS 9.3.3 loogu talagalay horumariyeyaasha, ugu horreyntii 9.7-inch iPad Pro